कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा कसरी हुँदैछ जनगणना ? (भिडियोसहितंं) « Yoho Khabar
कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा कसरी हुँदैछ जनगणना ? (भिडियोसहितंं)
काठमाडौँ – प्रत्येक १० वर्षमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत मुख्य गणना भोलिबाट सुरु हुने भएको छ । जनगणना नागरिकको विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई मुलुकको अवस्थाबारे जान्ने र योजनाहरु तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने आधार समेत भएकाले अनिवार्य रुपमा जनगणनामा सहभागी हुन विभागले अपिल समेत गरेको छ ।
‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा सहित सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरण अर्थात घर तथा घर परिवारको सूचीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएसँगै केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले कार्तिक २५ गते देखि मंसिर ९ गते जनगणना कार्यको मुख्य गणना गर्ने भएको छ । मुख्य गणना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुरु गरिने विभागले जनाएको छ । १५ दिनसम्म सञ्चालन हुने मुख्य गणनाका लागि देशभर झन्डै ४० हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकहरु खटिएका छन ।
जनगणनाका लागि संकलन गरिएका आफ्नो विवरण गोप्य रहने भएकोले भ्रम नराखी विना शंका गणनामा सहयोग गर्न विभागको अपिल छ । तथ्याङ्कको गुणस्तरीयता कायम गर्न अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिएको विभागले जनाएको छ । जनगणनाको सुरुवातसँगै चर्चा र सर्वत्र चासोको रुपमा हेरिएको नेपालको भू–भाग कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना कसरी हुँदैछ त ?
कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा तत्काल गणकहरू पुग्न सम्भव नरहेकाले अन्य माध्यमहरुको प्रयोग गरि गणना भने गरिने छ । प्रत्यक्ष गणनाका लागि भारतसँग कुटनीतिक पहल समेत अगाडि बढाइएको विभागको दावी छ । जनगणनामा मानिसको गन्ती मात्र नभई उसले गरेका वित्तिय कारोबार,उत्पादन,आम्दानी सबैको विवरण संकलन गरिन्छ । यही तथ्यांकको आधारमा मुलुकको विकास,बजेट बाँडफाँड,सामाजिक सुरक्षा तर्जुमा,स्वास्थ्य,खाद्यान्न आपूर्ति लगायतका विविध पक्ष तर्जुमा गर्ने आधार भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाई छ । संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएकाले यो जनगणनाको निकै महत्व हुँदा सबै तहमा चाहिने खण्डिकृत विवरणहरु जनगणनाबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जनगणना सञ्चालन गर्नका लागि देशभरमा ७ प्रदेश जनगणना कार्यालय, ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय र ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौं जिल्लामा भने ५ वटा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको र धेरै जनसंख्या भएका जिल्लाहरु मोरङ, झापा, सुनसरी, ललितपुर, रुपन्देही र कैलाली लगायतका जिल्लामा भने २÷२ वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय छ । विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुमा इ–सेन्सस विधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेसनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिहरुको जनगणना संकलन गरिने छ ।